Global Voices teny Malagasy » Palestina : Ny tantaran’ilay “martiora” avy any Gaza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Febroary 2009 19:25 GMT 1	 · Mpanoratra Ayesha Saldanha Nandika Lila
Sokajy: Palestina, Ady & Fifandirana, Fivavahana, Tanora
Mangirifiry ny fahafatesan'ny olona akaiky anao, nefa atao ahoana no hahazaka ny fahoriana raha ilay olona no naniry ny ho faty ? Ilay mpitoraka bilaogy avy any Gaza, Samaher Al Khazandar no nanoratra mikasika ny zanak'anabaviny antsoina hoe Mu’min Musa Al Khazandar, izay nanaraka ny miaramilan'ny Hamas, ary nanapa-kevitra fa ho faty martiora  mandritra ny ady ho an'i Palestina.
Hoy Samaher :
“Ry neny, rehefa nieritreritra aho dia handeha hanao martiora ho an'Andriamanitra” “Nanaiky handray ahy mantsy ny Izz Al Din Al Qassam Brigades …Tsy zava-dehibe ny hoe iza no mibaiko ahy hanao jihad  , fa ny zava-dehibe dia ny faniriana…Ny faniriako dia hiady ho an'Andriamanitra, ary hanafaka ny tanindrazako miaraka amin'ny namako ary nahita namana tsara aho ao amin'ny miaramila.” “Ry neny, maniry andro lava ivelomana ny olona, kanefa tsy misy fiainana raha tsy ny fiainana any an-koatra; hiezaka aho hanatanteraka ny lalana fohy indrindra hahazoako valisoa in-droa mihoatra izay tokony ho azoko.” “Ry neny, tsy isika no manantona ny fahafatesana, fa maty isika ary manao ny tsara mba hahafatesana, dia omen'Andriamanitra antsika izay niriny ho antsika. Raha resaka famonoan-tena izy ity, dia tsy ho tafaverina na dia iray aza aminay” “Ry neny, ny dikan'ny hoe jihad dia fandresena na martiora…Mivavaha ho ahy mba hahatongavako ho ny anankiray amin'ireny; maniry ny ho faharoa aho.” “Ry neny, Andriamanitra no nifidy ny martiora…fa tsy hoe ny olona rehetra dia fidian'Andriamanitra ho martiora. Mivavaha ho ahy mba hifidianan'Andriamanitra ahy, ary mba ho faly amin'izany ianao…Faly miaraka amiko ve ianao?” “Rehefa lasa martiora aho, ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hiverenako amin'iny lalana iny, lanjain'ny olona eny an-tsorony.” manako ao an-tsofin-dreniny miandry eo an-davarangana ireo tenin'i Mu'min ireo, mitazana ny lalana simban'ny daroka tafondro isaky ny misy fanafihana.Mirehitra ny alina mangatsiakan'ny ririnina ao Gaza, tahaka ny endriny, ary niventso izy,”Andriamanitra ô, 18 andro izay…18 andro teo ambany famindram-ponao,eto amin'ny taninao ary eto ambany lanitrao…18 andro tao anatin'ny hatsiaka, izay nandarohan'ny fiaramanidina tafondro manodidina azy…Andriamanitra ô, araka ny fahasoavanao dia handevina azy aho, avelao aho mba hahita azy ary handevina azy avy eo…Andriamanitra ô, any aminy ny masonao, miaro azy… efa napetrako eo Aminao izy…Hampangatsiaka ny afo ato anatiko ny fiverenany alohan'ny veloma mandrakizayl…Andriamanitra ô…Naniry ny ho martiora izy ary natoky Anao, Andriamanitra ô, minoa azy, ary ataovy ho isan'ny martioranao izy”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/20/1588/